Fonts – မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ
Wiki Category: Fonts
Windows7မှ နဂိုမူလ ဖောင့်များ
ဇော်ဂျီ အင်စတော်လာ တခုခု မှ အစားထိုးသွား၍ဖြစ်စေ၊ ပျက်သွား၍ ဖြစ်စေ၊ စာမမှန်တော့ ၍ ဖြစ်စေ၊ လိုအပ်ပါကာ အောက်ပါ ဖိုင် အား ဇစ်ပ် ဖြေ ပြီး Windows/Fonts ဖိုဒါ ထဲ copy, override လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ သတိ၊ ဤသို့ ပြုလုပ်စဉ် စက်မပိတ် ရပါ။ Arial-OrginalFonts Download ပြုလုပ်ရန်
Myanmar Unicode Fonts, licenses ( if known ) and links for download. Font Name Copyright License Manufacturer Designer URL Backup URL Cherry Unicode saiaungmurng2014 Nil Sai Aung Murng Sao Su Hkam Download Download Hopong Copyright © 2016 Khon Soe Zaw Thu. All Rights Reserved. Open Font License V1.1 Khon Soe Zaw Thu Khon Read More …
Windows 10 မှ နဂိုမူလ ဖောင့်များ
ဇော်ဂျီ အင်စတော်လာ တခုခု မှ အစားထိုးသွား၍ဖြစ်စေ၊ ပျက်သွား၍ ဖြစ်စေ၊ စာမမှန်တော့ ၍ ဖြစ်စေ၊ လိုအပ်ပါကာ အောက်ပါ ဖိုင် အား ဇစ်ပ် ဖြေ ပြီး Windows/Fonts ဖိုဒါ ထဲ copy, override လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ သတိ၊ ဤသို့ ပြုလုပ်စဉ် စက်မပိတ် ရပါ။ MMText-Arial-OrginalFonts (2.2MB) Download ပြုလုပ်ရန် Windows 10 Default Fonts (181MB) Download ပြုလုပ်ရန်(အပေါ်က ဖောင့်များ Replace လုပ်ပြီးသော်လည်း အဆင်မပြေသေးပါက Windows 10 Default Fonts (181MB) ကိုဒေါင်းပြီး Replace All လုပ်ပေးပါ။) Restore Default Font Setting Read More …